UPDATE: DF Somaliya oo wax laga xumaado ku tilmaamtay hadal ka soo yeeray Hay’ado Caalami ah. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: DF Somaliya oo wax laga xumaado ku tilmaamtay hadal ka soo...
Muqdisho (Halqaran.com) – War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federalka Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in dowladda ay ka xun tahay hadal ka soo yeeray hay‘addaha Bisha Cas, kaasi oo ah Qaraxii Ex-control Afgooye inuu ahaa iska hor imaad u dhaxeeyay dhinacyada Soomaaliya isku hayo.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay aad uga xun tahay Warka ka soo Baxay Hay’adaha Bisha Cas iyo Laan qeyrta Cas (ICRC & SRCS) Soomaaliya, oo weerarkii iyo Xasuuqii 28 Dec 2019 Argagixisadu ku soo qaaday shacabka Soomaaliyeed ku tilmaamay Iska hor imaad u dhexeeyay laba Dhinac.
Dhinaca kale, Dowladda Soomaaliya ayaa waxay soo dhaweyneysay War-Murtiyeedkii Kasoo baxay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay oo 30-kii Dec. 2019 Kulan dag dag ah ka Yeeshay Weerarkii Argagixisada Al-Shabaab ay ka geysteen Magaalada Muqdisho, kaasoo lagu laayay Dad Shacab ah oo aan waxba galaybsan.
DF Somaliya oo wax laga xumaado ku tilmaamtay hadal ka soo yeeray
Hay’adaha Bisha Cas